Written by Ashia Nkontsa on 27/02/2019
Kuncunciwe kwisibhedlele iGroote Schuur ngezinga layo eliphezulu
Bazakufumana ithuba elihle lobomi obungcono abantwana abasandul’ukuzalwa kwisibhedlele i-Groote Schuur eKapa. Emva kophuhliso lweminyaka emibini lisebenza ngokupheleleyo igumbi labantwana abasandul’ukuvela abadinga ukukhathalelwa okukhethekileyo nelinobuxhaka-xhaka bezobuchwephesha. Umzukulwana wogqirha wokuqala wokuthomalalisa iintlungu eGroote Schuur uGqirha Jack Abelson unikezele ngemali yokulungisa eli gumbi ewonga uyisemkhulu ongasekhoyo. Intloko yesebe unjingalwazi Mike Harrison uthi akazange walibona icandelo lezonyango elinobuchwephesha obukwizinga eliphezulu njengelo kwiminyaka yakhe engamashumi amabini anesihlanu yokusebenza kumaziko onyango olukhethekileyo lweemveku. Eli candela lamkela izigulane eziphakathi kwamashumi asixhenxe anesihlanu namashumi asibhozo kwaye inendawo yokwamkela oonina babantwana abavele phambi kwexesha kwicandelo i-Kangaroo Mother Care.
babanjiwe abarhanelwa abane ababandakanyeka kwizithyolo zobugebenga
Kulindeleke ukuba bavele enkundleni kungentsuku zatywala abarhanelwa abane kwiziganeko ezahlukeneyo zokufunyanwa neziyobisi kwakunye nemikhon’ekati eCrossroads. Usomlomo wamapolisa ephondo leNtshona Koloni uCaptain Noloyiso Rwexana uthi kubanjwe isibini esincuma kunye esimalunga namashumi amabini eminyaka ubudala emva kokuba amapolisa efumene iipilisi zemandrax ezilikhulu elinamashumi amabini anesihlanu zifihlwe epheyileni ekhayeni lesi sibini. Uthi kukwafunyenwe umpu neembumbulu. OkaRwexana uhambisa athi kubanjwe indoda nomntwakwayo emva kokuba amapolisa efumene umpu wohlobo lwe9mm neembumbulu ezintandathu zifihlwe kwitasi yezinto zokuthambisa. Uthi kukwafunyenwe neepilisi ezingamashumi amathathu anesine ze-mandrax,umgubo osetyenziselwa ukwenza iziyobisi kwakunye nemali.
Kudingeka ukuqiniswa kokhuselo kwintaba yetafile
Ilinge lokhuseleko loluntu i-Table Mountain Watch ithi kudingeka iqhinga buchule lobambiswano lokuqubisana nolwaphulo-mthetho kwimiyezo yolonwabo kazwelonke yeli leKapa. Lo mbutho uthi sele kuhlaselwe abantu amatyeli amathandathu ukususela ngenyanga yoMqungu nalapho kwiveki ephelileyo kuqutyulwe emlenzeni umntu ongumenyuki wentaba kwidama iKleinplaas cebu kuhle eSimon’s Town. I-Table Mountain Watch ihlab’ikhwelo lokuba amacandelo ahlukeneyo angqubanise iintloko khon’ukuze kupheliswe nya umkhuba wokuhlaselwa kwabantu abenyuka intaba kwanabakhweli bebhayisekile. Umnumzana Andre Van Schalkwyk walo mbutho uthi ezona ndawo zolwaphulo-mthetho ziquka iSignal Hill, Kleinplaas kwakunye naphambi kweDeer Park. Kumnyaka ophelileyo ziziganeko ezingamashumi amahlanu anesithoba ezibikiweyo nezichaphazele abantu abalikhulu elinamashumi amabini anesibhozo, lo gama kumnyaka ongaphambili iziziganeko ezingamashumi amane zichaphazela amaxhoba angamashumi alithoba ananye.
Umbutho weCOSATU ufuna umthetho wotyalo mali uxoxwe yiNCOP
Umfelandawonye weemanyano zabasebenzi kwilizwe loMzantsi Afrika i-Cosatu ithi ifuna umthetho osayilwayo wotyalo-mali karhulumente kufuneka ushukuxwe libhunga lamaphondo phambi kokumiliselwa kwawo emsileni kwinyanga yoKwindla phambi kolonyulo jikelele lwenyanga kaCanzibe. I-Cosatu ithi ixhalabile malunga neenzame zangaphaya komdiya-diya zokuthibaza lo mthetho ujoliswe ekuqiniseni ulawulo,ukuthabatha uxanduva kwakunye nokuvelisa izivumelwano zePIC elubala. Izolo, ipalamente kazwelonke iwamkele lo mthetho usayilwayo nekufuneka ngoku upasiswe yi-NCOP phambi kokuba utyikitywe ngokusesikweni ngumongameli Cyril Ramaposa.Ukanti i-DA namanye amaqela aphikisayo achasene nalo mthetho nalapho i-DA ithi uvula ikroba lokuba iingxowa-mali zomhlala-phantsi zinyanzeleke ukuba zityale imali kwiiProjekthi ezithile esele zityunjiwe ezijoliwe kuphuhliso lokuhlala neloqoqosho.
Liyanwenwa inani labaprofeti abaxokayo
Ikomishoni yokukhuthaza nokukhusela amalungelo enkcubeko,inkolo neelwimi i-CRL ithi nangonanje ziiqhuba iingxoxo malunga nenkululeko yezenkolo, baya besanda abantu abaxhatshazwa mihla le ngabaprofeti bobuxoki abazibiza ngokuba bangabathunywa bakaThixo. Kuthe ndii kumaqonga ezonxibelelwano i-video kaPastor Alph Lukau ebonisa ngathi kuvuswa umntu obhubhileyo. Le komishoni ithi nangonanje izakufaka eyayo ingxelo yophando ngakuLukau, ayinandlela yokumbambisa kungenjalo yokumswantsulisa kodwa noko kunjalo izakuqhubeka nokulwela ukupasiswa kwemithetho elawula iityalike. Usihlalo wekomishoni unkosikazi Thoko Mkhwanazi-Xaluva uthi aliqela amaxhoba asele emkrwecile echaza ukuxhatshazwa kwawo ziinkokheli zawo zenkolo. Uthi aba befundisi banobuchule bokuchwechwela ezona ndawo zinabantu aboyiseka lula baze babajike iingqondo.